Ny TIC Ho Fampandrosoana Any Afrika Miteny Sy Mampiasa ny Teny Frantsay · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Mey 2017 5:00 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 简体中文, 繁體中文, Italiano, polski, Español, English
[Rohy amin'ny teny frantsay] Na dia voamarika tsy azo lavina aza ny fisian'ny fihazakazahan'ny NTIC (Teknolojia Vaovaon'ny Fampahalalambaovao sy ny Fifandraisana) ho an'ny fampandrosoana ao Afrika miteny sy mampiasa ny teny Frantsay, nbola azo lazaina ho tratra aoriana ihany io ampahan'i Afrika io raha oharina amin'ireo nàmany miteny sy mampiasa ny teny Anglisy. Ny fahitàna io fahataràna io dia avy amin'ny asa nataon'ireo bilaogera marobe miteny sy mampiasa ny teny frantsay izay afaka vakiana ao amin'ny bilaogy Franco Techno Gap.
Tsy dia hita soritra loatra ny anton'ìo fahataràna io, saingy misy fanazavana vitsivitsy aroso tsindraindray : 1) ny governemantan’ireo firenena afrikana miteny sy mampiasa ny teny anglisy toa an'i Afrika Atsimo, Maorisy, Ejipta, no nandroso aloha ny aterineto haingam-pisosa. Vokatr'izay, amin'ny ankapobeny dia lafo be ny vidin'ny fidirana amin'ny aterineto any Afrika miteny sy mampiasa ny teny frantsay, araka ny hita ao amin'ny tranonkala atelier des médias (RFI). 2) Raha ampifandraisina amin'ny fanazavàna teo aloha: “Toa haingana be ny firoborobon'ireo firenena miteny sy mampiasa ny teny anglisy raha miohatra amin'ny miteny sy mampiasa ny teny frantsay” hoy i Miquel, bilaogera. 3) ny teny anglisy hatrany no teny atolotra anao voalohany manerantany raha vao resaka teknolojian'ny fampahalalambaovao sy fifandraisana.
Ny bilaogy itambarambe ‘ Sendikàn'ireo Vehivavy Tantsaha ao Afrika Atsinanana sy ao Tsady (UFROAT) dia manoritsoritra ireo tanjon'ny fikambanany tahaka izao:
Tetikasa tsy misy hafa amin'izany ny ao Madagasikara, Bekoto Paysans, dia miezaka ny hitahiry ny zon'ireo Malagasy tantsaha, manolotra ny momba ny asan'izy ireny sy ireo fanamby atrehany isanandro. Bekoto, Malagasy iray mpihira fantadaza, no mitarika ilay tetikasa. Mpikambana ao anatin'ilay tarika tsy tontan'ny ela Mahaleo izy. Bekoto dia manoratra fa ireo tantelin'i Madagasikara sy ny ranon-tantely vokariny dia manana toetra mampiavaka azy manokana, saingy tandindonin'ny faharingànana izy ireo.
Manoratra momba ny fanamby apetraky ny fampidirana ny NTIC ho ao anatin'ny sehatry ny fanabeazana any aminà firenena dimy ao Afrika atsimon'i Sahara (Benin, Kamerona, Ghana, Mali et Senegaly) i Djénéba Traoré. Manipika izy hoe :
Fenoin'i Camedevelop ny tombana nataon'i Djénéba Traoré ho an'i Kamerona. Tsipihany fa ny Fampianarana Fanofanana Mpampianatra (Ecole Normale) ao Yaoundé tsy mbola namoaka hatramin'izao manampahaizana manokana amin'io sehatra io, izay miteraka tsy fahampian'ny mpampianatra. Ny tsy fisian'ny herinaratra any amin'ireo faritra ambanivohitra sy ireo fepetra “kafkaïennes” mba hampidirana ny solosaina ho any an-tsekoly, ho azy, no antony fototra miteraka fahataràna amin'ny fampidirana ny NTIC any an-tsekoly.
Boukary Konaté manolotra vaovao maha-be fanantenana kokoa momba ny NTIC ao anatin'ny fanabeazana any Mali. Boukary Konaté dia nikarakara atrikasa iray NTIC ho anìireo mpampianatra tao Bamako, Mali . Porofoin'ity lahatsary manaraka ity ny fahalinan-dry zareo hianatra ireo teknolojia vaovao :
Tanisain'i Boukary Konaté ihany koa ny fomba ataon'ireo tovovavy eny amin'ny lisea nahafahan'izy ireo naka torohay momba ny andriamby manana tendro roa tamin'ny fianarana manao fikarohana tsotra tao amin'ny Googe. Marihan'ireo mpianatra ireo ihany koa ireo tombontsoa hafa azo amin'ny fampiasàna NTIC: ny fahafahana mizara vaovao amin'ireo mpianatra hafa ao an-dakilasiny, ny fikarakarana mora foana ireo fihaonana, izay ahafahan-dry zareo mampihena ny vola aloa amin'ny antso an-telefaona.
This post is part of a series commissioned by the International Development Research Centre (IDRC) on the future of ICTs and development. Lahatsoratra rehetra